I-Blythswood Cottage - ukushaywa wumoya emaphandleni - ukubukeka okuhle - I-Airbnb
I-Blythswood Cottage - ukushaywa wumoya emaphandleni - ukubukeka okuhle
Wallabadah, New South Wales, i-Australia
Indawo esepulazini ibungazwe ngu-Kate
Phumula futhi uphumule kuleli kamelo elinamakamelo amabili, indlwana elungiswe ngokuphelele enokubukwa okuhlaba umxhwele kuwo wonke amakamelo. Le ndlwana yezwe enhle itholakala ngokuphelele endaweni enhle, enokuthula, engama-acre angu-500, ngemizuzu embalwa nje uma usuka e-New England Highway. Phumula ngasemlilweni; jabulela ipikiniki yasepulazini; thatha uhambo losuku oluya e-Nundle; isidlo sasemini e-Goonoo Station eseduzane noma e-Willow Tree Inn; noma uvumele ababungazi bakho abahle bathuthukise imininingwane yohambo olwenzelwe wena yezindawo ezithandwayo. Ukuvakasha okukahle kakhulu.
I-Blythswood Cottage inikeza indawo yasemaphandleni lapho izithandani, umndeni noma abangane bangaphumula khona, babuyele emvelweni futhi bavuseleleke, noma bajabulele izindawo ezithandwayo, imicimbi kanye nokudla okunikezwa umklomelo esifundeni.
Indlwana isendaweni engama-acres amathathu engadi ezungeze indlu yase-Blythswood. Inegceke layo langasese elingemuva futhi ihlukaniswe nendlu enkulu ngodonga lwamatshe olugoqiwe kanye nemidwebo yengadi.
I-Blythswood iyipulazi elisebenzayo futhi kuye ngokuthi kwenzekani epulazini, izivakashi zizokwaziswa ngezindlela zokuhamba ezihamba phambili nezindawo zepikiniki. Izindawo eziningi zepikiniki zijabulela ukubuka i-65km ukuya e-Mount Parry ngokuqhelelana, kanye nesibhakabhaka se-Great Dividing Range. Kunamadama ayisikhombisa egcekeni kanye nomzila ongadumile onikeza izimpophoma ezincane ezinhle ngemva kwemvula.
Sicela uqaphele: eminye imisebenzi yokubukeka kwendawo isenziwa, kodwa ngeke yenziwe ngenkathi izivakashi zihlala. Ingadi kungenzeka ingasungulwa ngokugcwele ngesikhathi sokuhlala kwakho.
Ukuze wenze ukuhlala kwakho kujabulise futhi kukhululeke ngangokunokwenzeka, singahlela isidlo sakusihlwa esidliwayo; ama-hamper esidlo sasekuseni noma obhasikidi bepikiniki abaqokiwe. Lapho ubhukha ukuhlala kwakho, uzonikezwa ifomu loku-oda kusengaphambili (iviki ngaphambi kokuhlala kwakho) futhi i-oda lakho lizobe likulindile lapho ufika. Ukudla kwakho kungalungiselelwa ekhishini elisha, elinakho konke okudingekayo njengoba ujabulela ukubuka indawo evulekile emagqumeni.
Mayelana nendlwana: I-Blythswood Cottage
isanda kulungiswa ngokugcwele, ngekhishi elisha sha, indlu yokugezela kanye nelondolo.
Ikamelo lokulala elihamba phambili lineminyango yase-France evulekile kuvulande omncane wangasese; okhaphethi be-sisal; izivalo zezitshalo; amashidi angu-100% kanye namacala omcamelo; kanye nombhede omkhulu omkhulu ongahlukaniswa ube amashidi amabili uma ecelwa. Inamafasitela ezinhlangothini ezimbili abukeka kahle engadini nasendaweni ehlanganisa amawa ama-White Rock amangalisayo ebangeni.
Ikamelo lesibili linamakhaphethi we-sisal; izivalo zokutshala; amashidi namacala omcamelo; kanye nombhede omkhulu we-queen. Inamafasitela amakhulu ezinhlangothini ezimbili anezindawo ezivulekile ezizungezile.
Indawo yokuhlala ihlotshiswe ngomuzwa ontofontofo, osebenzayo, wesimanje futhi iklanyelwe ukunikeza izivakashi ukuhlala okunethezekile kakhulu ngangokunokwenzeka. Osofa ababili bajabulela ukubukeka okuhle kanye netafula lokudlela lasemaphandleni yindawo ekahle kakhulu yokujabulela ukudla nabangane noma umndeni.
Ikhishi linomshini wokugeza izitsha, uhhavini, uhhavini, isitofu kanye nefriji eyisisekelo. I-crockery eyisisekelo, izingilazi, izinto zokudlela kanye nemishini yokupheka ziyatholakala.
Igumbi lokugezela elisha sha lineshawa, umcengezi wezinyawo nendlu yangasese. Indawo yokuwasha inomshini wokuwasha ophambili negumbi lokugezela.
Indlwana inomshini wokupholisa umoya oguquguqukayo kanye nomlilo wokhuni othakazelisayo ukuze kugcinwe indawo ithokomele ebusika.
I-Blythswood Cottage itholakala emizuzwini embalwa nje ukusuka e-New England Highway (phakathi kwe-Walla Kalendah ne-Tamworth), ngaphakathi kwama-acres angu-3 engadi ezungeze indlu yase-Blythswood.
Sitholakala: ngaphansi kwemizuzu engu-20 ushayela ukusuka edolobhaneni elihle lase-Nundle kanye ne-Peel Inn engokomlando; ngaphansi kwemizuzu engu-20 ukusuka e-Glasshouse enhle kakhulu, ethole umklomelo e-Goonoo Goonoo restaurant; nemizuzu engaphansi kuka-20 ukusuka e-Graze ewine umklomelo e-Willow Tree Inn. Sicela ukhumbule ukuthi lena ipulazi elisebenzayo.
Isikhungo esiphithizelayo sezwe lase-Tamworth sisekude ngemizuzu ecishe ibe ngu-35. Umbungazi wakho uyakujabulela ukuhlinzeka ngemininingwane yohambo yomuntu siqu yezitolo eziyinhloko zokuthenga, zokudlela, zomlando namasiko endaweni. I-Blythswood Cottage iyindawo ekahle kakhulu yokujabulela Umkhosi Womculo Wezwe lase-Tamworth.
I-Tamworth inezindawo ezimbili ezinhle kakhulu zokudlala igalofu. I-Tamworth Golf Course, kanye ne-Greg Norman waklama i-Longyard Golf Course.
Isikhathi sokushayela kusuka e-Sydney cishe ngamahora angu-4.5, futhi kusuka e-Newcastle, amahora angu-2.5.
Indlwana itholakala ngaphakathi kwengadi engama-acre angu-3 yendlu yase-Blythswood.
Inombolo yepholisi: PID-STRA-5949-2